Daawo qasriga cusub ee loo dhisay madaxweynaha cusub ee dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan | Somaliland Hargeisa City
Daawo qasriga cusub ee loo dhisay madaxweynaha cusub ee dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan
31 October, 2014 — somaliland1991
madaxweynaha cusub ee dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan
cusub ee loo dhisay madaxweynaha cusub ee dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan oo horaantii bishii Ogos 2014, ku guulaystay madaxtinimada dalka Turkiga. Erdogan ayaa taariikhda ku galay, in uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey ee shacabka dalka Turkigu si toosa u soo doortaan. Madaxweynihii isaga ka horreeyey, ee Abdula Gûl,waxaa soo doortay xildhibaanada aqalka wakiilada ee Turkiga. Qasrigan cusub ee loo dhisay madaxweynaha cusub ee dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxaa ku baxay aduun dhan 350 miljan oo dollar. Waxaana qasrigan laga dhisay caasimadda dalka Turkiga ee Ankara. Furitaanka qasrigan oo lagu soo beegay maalintii aasaaskii dalka Turkiga casriga, oo ahayd 1923 . maalintii uu hogaamiyihii, Mustafa Kemal Ataturk grundade 1923. aasaasay Turkiga casriga oo gudhig uga dhigay dalkiisa in uu noqdo dal culmaani ah.
Waxa Qasrigu ku fadhiyaa baaxad dhan,ama uu isku wareeg dhan yahay 200 000 mitir isku weer. Waxanu ka kooban yahay 1000 qol.
Qasriga madaxtooyada dalka Turkiga ayaa waxaa laga dheena kaaraa xadeerada dalka Turkiga, iyo xadaaradda ay u leeyihiin xaga dhisida dhismayaal qurux leh, waxaa kale oo dhisamahani iftiiminayaa awoodii dalka Turkigu uu mar dunnida ku lahaa oo dib u soo noqonaysa.
Dalka Turkiga ayaa 12 sanno ee danbeeyey, uu xukunka hayey, madaxweynaha cusub ee dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, waxa uu gaadhsiiyey heer aad u sareeya dalka Turkiga, hadday noqoto xaga, siyaasadda adduunka, dhaqaalaha, ganacsiga, difaaca, waxbarashada iyo caafimaadka.
Turkigu waxa uu xubin ka yahay , gaashaan buurta Nato, waana dalka ugu awooda badan xaga ciidamadda Nato. 48 000 kun oo ciidan ayaakaga jira Turkiga Nato.
Qasriga cusub ee loo dhisay madaxweynaha cusub ee dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan oo horaantii bishii Ogos 2014, ku guulaystay madaxtinimada dalka Turkiga. Erdogan ayaa taariikhda ku galay, in uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey ee shacabka dalka Turkigu si toosa u soo doortaan. Madaxweynihii isaga ka horreeyey, ee Abdula Gûl,waxaa soo doortay xildhibaanada aqalka wakiilada ee Turkiga. Qasrigan cusub ee loo dhisay madaxweynaha cusub ee dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxaa ku baxay aduun dhan 350 miljan oo dollar. Waxaana qasrigan laga dhisay caasimadda dalka Turkiga ee Ankara. Furitaanka qasrigan oo lagu soo beegay maalintii aasaaskii dalka Turkiga casriga, oo ahayd 1923 . maalintii uu hogaamiyihii, Mustafa Kemal Ataturk grundade 1923. aasaasay Turkiga casriga oo gudhig uga dhigay dalkiisa in uu noqdo dal culmaani ah.
Waxa uu isku wareeg dahn yahay 200 000 mitir isku weer. Waxanu ka kooban yahay 1000 qol.
Turkish Presidential residence to change after 91 years.
S. Cadnaan Xaaji Ismaaciil
« Xukumadda dalka Sweden oo ictiraaftay Falastiin
Joornaal ka soo baxa dalka Sweden oo la yidhaadho Världen (The World) maqaal ku soo qoray u dhignaa Somaliland önskar svenskt erkännande, ” Somaliland oo doonaysa in Dawladda Iswedhishku aqoontsato” »